Thinzar Wint Kyaw – Celebrity News
Home > Posts tagged "Thinzar Wint Kyaw"
Tag: Thinzar Wint Kyaw
- February 22, 2019 5121352
"ဟိန်းမင်းသူ က အရမ်းရိုက်စေချင်လို့ "You Are The One" သီချင်းဗီဒီယို (Music Video) ရဲ့ အချစ်ခန်း (Love Scenes) တွေမှာ ပါဝင် သရုပ်ဆောင် ပေးခဲ့တာပါ" လို့ပြောလာတဲ့ သင်ဇာဝင်ကျော် နဲ့ ဟိန်းမင်းသူ တို့ရဲ့ Music Video ရိုက်ကွင်း။ Myanmar Celebrity Update: Actress Thinzar Wint Kyaw & Hein Min Thu's "You Are The One" Music Video Making #HeinMinThu #ThinzarWintKyaw #MyanmarActress
- July 18, 2018 0981
ဇူလိုင်လ (၁၇) ရက်နေ့ အတွက် Myanmar Celebrity အနုပညာ နေ့စဉ်သတင်း.... 1.ကိုသီဟကို ယုံကြည်တဲ့အတွက် ဒီအမှုက မဖြစ်နိုင်ပါဘူးဆိုတဲ့ အနုပညာရှင်များ 2.ဝတ်စုံ ကိစ္စက မရည်ရွယ်ဘဲ ဖြစ်သွားတာပါဆိုတဲ့ သင်ဇာဝင့်ကျော် 3.အဆိုတော် အစ္စဏီအမှု (၁၀) ကြိမ်မြောက် ရုံးထုတ်စစ်ဆေး 4.စကားပြောတဲ့ အသံကို ဝေဖန်ကြတဲ့ အတွက် စိတ်ထိခိုက်ခဲ့ရတယ် ဆိုတဲ့ ဧငြိမ်းဖြူ 5.ပွဲတက်ဖက်ရှင် နဲ့ပတ်သက်ပြီး ပရ်ိတ်သတ်တွေ ရှင်းပြခဲ့တဲ့ နန်းစန္ဒာလှထွန်း နှင့် အခြား စိတ်ဝင်စားစရာ အနုပညာသတင်းများ စုစည်း တင်ဆက်မှု။ Myanmar Celebrity Daily News #ThihaTinSoe #ThinzarWintKyaw #NanSandarHlaHtun #ANyeinPhyu #LinZarniZaw #MoeSetWine #MyanmarCelebrityNews
- July 15, 2018 0412
ဇူလိုင်လ (၁၅) ရက်နေ့ အတွက် Myanmar Celebrity အနုပညာ နေ့စဉ်သတင်း.... 1. အမျိုးသမီးတစ်ဦးကို အလိုမတူဘဲ အဓမ္မပြုကျင့်မှုဖြင့် အတိုင်ခံထားရတဲ့ သီဟတင်စိုး 2. ဝေဖန်ပိုင်ခွင့် ရှိပေမယ့် မဟုတ်မမှန်ပြောရင် တရားစွဲမယ်ဆိုတဲ့ သင်ဇာဝင့်ကျော် 3. အသည်းကင်ဆာ ရောဂါ နဲ့ ကွယ်လွန်ခဲ့တဲ့ ဦးရဲလွင်(မဇ္ဈိမလှိုင်း) ရဲ့ ဈာပန 4. မိုရီဆာကီဝင်း က Talent ရှိတဲ့ လူတစ်ယောက်ပါဆိုတဲ့ အောင်ရဲလင်း 5. Project K ဘုန်းနေလင်း နဲ့ အလှမယ် ယွန်းဝင့်လွှာအောင် တို့ စုံတွဲ နှင့် အခြား စိတ်ဝင်စားစရာ အနုပညာသတင်းများ စုစည်း တင်ဆက်မှု။ Myanmar Celebrity Daily News: #ThihaTinSoe #AungYeLinn
Myanmar Celebrity အနုပညာ နေ့စဉ်သတင်း ဇွန်လ (၅) ရက်
- June 6, 2018 1208
ဇွန်လ (၅) ရက်နေ့ အတွက် Myanmar Celebrity အနုပညာ နေ့စဉ်သတင်း... 1. ကျောက်စိမ်းရုပ်ပွားတော် တစ်ဆူ လှူဒါန်းခဲ့တဲ့ ယွန်းဝတီလွင်မိုး တို့ ဇနီးမောင်နှံ 2. စော်ကားလိုက်၊ တောင်းပန်လိုက် လုပ်တဲ့ ရုပ်ရှင်သမားတွေထဲမှာ မပါဘူးဆိုတဲ့ ဆွေဇင်ထိုက် 3. အဆိုတော် ပိုင်သက်ကျော် ရွေးချယ်မယ့် အိမ်ထောင်ဖက်က ဘယ်လိုပုံစံလဲ 4. အလုပ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး BIKINI ၀တ်ရင်း Facebook မှာ ပုံ တင်ဖြစ်တဲ့ သင်ဇာဝင့်ကျော် 5. ကျောင်းစတင်တက်နေပြီဖြစ်တဲ့ မယ်လိုဒီ ရဲ့ သားလေး သိဒ္ဓိစစ် နှင့် အခြား စိတ်ဝင်စားစရာ အနုပညာသတင်းများ စုစည်း တင်ဆက်မှု။ Myanmar Celebrity Daily News:
- June 6, 2018 0225